Aung's Investment: Make or Break Tonight
DJIဟာ EMA200 lineအောက်မှာ ဝပ်နေတုန်းပါပဲ။ Wednesday June 2က Candleဟာ တော်တော်လေး Strongဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတောင်ကိုတော့ မကျော်နိုင်သေးပါဘူး။ သိပ်မကြိုက်တာကတော့ ဒီmini-rallyမှာ Volumeဟာ Decliningဖြစ်နေတာပါပဲ။
Good Newsကတော့ NASDAQ Compositeဟာ EMA200ကို အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်သွားတာပါပဲ။ Technology Companyတွေဟာ Correctionဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရှေ့ကစကျတက်သလို Recoveryဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း အရင်ပြန်နာလန်ထူတတ်ကြပါတယ်။
အရေးကြီးတာက ဒီနေ့ည USမှာ Employment Situation Reportထွက်ပါမယ်။ Mayလထဲမှာ အလုပ်အသစ်တွေ ၅၄၀၀၀၀လောက်တိုးမယ်လို့ မှန်းထားပြီး Unemployment %ကတော့ ၉.၉ကနေ ၉.၈ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပတ်တိုင်းထွက်တဲ့ Jobless Claims dataတွေကတော့ သိပ်အားရစရာ မရှိလှပါဘူး။ Aprilနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် သိပ်မဟန်လှပါဘူး။ ဒီတော့ Beat the estimateဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ ၅၀-၅၀ပဲ။ Marketဟာ ကောင်းတဲ့ Newsကိုယူပြီး တော်တော်လေးတော့ Price-inလုပ်ထားကြပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တကယ် Reportကောင်းရင် Marketဟာ Bullish momentumကောင်းကောင်းလေး ရသွားပါလိမ့်မယ်။
သတိထားရမှာက Any bad news from Europeပါ။ Spainက ပြဿနာတွေဟာ ဘာမှပြီးမသွားသေးပါဘူး။ Businessတွေကိုတောင် ငွေချေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီည Employment Situationကတော့ Make or Break for US marketsပါပဲ။ ထင်ထားသလောက်မကောင်းရင်တော့ Sell-offဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ US Eastern Time 8:30am, Australian Eastern Time 10:30pmမှာ ထွက်ပါမယ်။
PS : I believe Microsoft(MSFT) is cheap again. Cheaper than where I used to recommend last year. Havealook at it.
Posted by Aung Myo Htet at 6/04/2010 01:04:00 PM
Labels: alert, reversal, warning